ONIVERSITE FJKM RAVELOJAONA: Manana sampam-piofanana 9 azon’ny mpianatra hisafidianana – Madatopinfo
Maro amin’ny tanora no sahiran-tsaina amin’ny fitadiavana fianarana aorian’ny nahazoana bakalorea. Misy ny hetsika « Salon de l’étudiant – spécial rentrée 2021 » eny amin’ny Lapan’ny tanora sy ny fanatanjahantena Mahamasina mandritra ny roa andro izay handraisan’ny Oniversite FJKM Ravelojaona anjara. Ahitana sampam-pianarana 9 ao aminy izay ahafahan’ny mpianatra misafidy malalaka. Mampiavaka izany sekoly ambony izany amin’ny tsy miankina hafa ny fitaizana ara-tsaina sy ara-panahy, eo ihany koa ny fiatrehan’ny mpianatra taona voalohany sahady ny fianarana asa na ny « stage » ka ny eo anivon’ny sekoly ihany no manolotra izany ho an’ny mpianatra.
« Tafiditra amin’ny sivana alohan’ny hidirana taona voalohany ato amin’ny Oniversite FJKM Ravelojaona ny tsy maintsy hanaovana fitsapam-pahaizana. Misy ny fanadinana an-tsoratra sy am-bava amin’ny fiteny frantsay amin’izany », hoy ny tompon’andraikitra, Tojoniaina Randriamiarison. Hatreto, mbola mandray mpianatra izy ireo ary mbola malalaka ihany koa ny toerana. Araka ny fantatra ihany koa, efa misokatra ny Master ao amin’ny Oniversite FJKM Ravelojaona ho an’ny sampam-piofanana Gestion sy Communication – Multimédia ary Informatique. Tsiahivina moa fa ao Ampandrana no misy azy ho an’ireo manaraka ny fiofanana akademika, ao Ambatobevanja kosa ho an’ny Paramédicaux ary ao Ambatonakanga no misy ny toeram-panomanana ny ho Mpitandrina FJKM na teolojia. Ho an’ireo tsy afaka namonjy ity hetsika ao Mahamasina ity araka izany dia azo atao ny manantona mivantana amin’irek toerana voalaza ireo. Nanamafy ihany koa moa ny tompon’andraikitra fa tsy voatery ho mpino FJKM ihany akory no afaka manovo fahalalana ao amin’izy ireo fa raisina ireo avokoa ny rehetra.
FITOMBOAN’NY CORONAVIRUS ANTANANARIVO : «Efa azo antoka fa ho resy matoa novahan’ny mpitondra .»Hoy ny mpampianatra mpikaroka Christophe Angelo Rahajanirina